Gawaarida casriga ah ee degmada Bursa ee Kestel | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara16 BursaBaarkinka casriga ah ee Kestel District of Bursa
19 / 03 / 2019 16 Bursa, GUUD, WADADA, Nidaamyada Tire Wheels, Gobolka Marmara, TURKEY
gawaarida casriga ah ee ku yaal koontada bursan
Dowlada hoose ee Bursa waxay ku dartay degmada Kestel maalgashiyadeeda wanaajinaya tayada nolosha ee degmooyinka oo dhan. Aasaaska baarkinada dhaadheer ee dabaqyada badan iyo aagga suuqa lagu kasbado ee Kestel ayaa la dhigay xaflad.
Laga soo bilaabo gaadiidka ilaa kaabayaasha, isboortiga illaa hidaha iyo dhaqanka taariikhiga ah, Dowladda Hoose ee Bursa, oo fulisay mashruucyo u qaadi doona Bursa mustaqbalka, ayaa bilaabay maalgashi ku kordhinaya qiimaha tayada nolosha ee Degmada Kestel. Dabaqa sare ee baarkinada xNUMX dabaqa gawaarida oo leh awood guud ee gawaarida 386 waxaa loo isticmaali doonaa aag suuq. Duqa Magaalada Bursa Metropolitan Alinur Aktaş, Wasiir kuxigeenka Caafimaadka Halil Eldemir, kuxigeenka Bursa Efkan Ala, Müfit Aydın iyo Vildan Yılmaz Gürel, Gudoomiyaha Degmada Kestel Ahmet Karakaya, Duqa Magaalada Kestel Yener Achan iyo Gudoomiyaha Degmooyinka AK Party Ayhan Salmaan, Musharaxa Duqa Magaalada AK Party Kestel Hogaamiyaha ayaa aqoonsaday waxaana lagu tuuray xaflad ay ka soo qeyb galeen muwaadiniin badan.
Wejiga Kestel ayaa isbeddelaya
Duqa magaalada Bursa Alinur Aktas, khudbaddiisa ayuu ka jeediyay xafladdan furitaanka, xaafada Ahmet Vefik Pasha waxaa lagu dari doonaa goobta gawaarida la dhigto halka aagga suuqa uu qiime ku soo kordhin doono aragtida gobolka, ayuu yiri.
Duqa magaalada Aktaş wuxuu cadeeyay in Kestel ay kamid tahay degmooyinka qiimaha weyn kuleh xaga beeraha, warshadaha iyo dalxiiska. Waxaan sameyn doonaa mashaariicda soo socota iyadoo la raacayo horumarkan. Marka laga soo tago in yar oo ka mid ah dhulalkayaga miyiga ah, kaabayaasha dhaqaalaha ayaa dhammaaday. Inta hartay waa la dhammeysan doonaa muddadan. ”
Isbarbar dhigga horumarka ballaaran, ciriiriga taraafikada ayaa umuuqda inuu yahay mid buuq badan, laakiin xaaladdan waxaa xallin doona labada baabuurta ee dabaqyada badan leh iyo baarkinada dabaqa labaad, ayuu yiri Aktaş, harika Waxaan kasoo bixi doonaa shaqooyin cajiib ah Kestel. Waxaan kusii fideyneynaa wadada tareenka ee bari, 1,5 kiiloomitir. Waxaan ka dhiseynaa garoon ku yaal bariga aaggan. Baarkinka gawaarida iyo aagga suuqa ee aan u asaasnay ​​waxay sidoo kale qiimo weyn ku soo kordhin doontaa degmada muuqaal ahaan erek ah.
Thanks to Duqa Aktaş
Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Caafimaadka Halil Eldemir, oo ka hadlay xafladda, ayaa xusay in labadii ama saddexdii baabuur ee la soo dhaafay lagu arkay dariiq, hadda laba guri ay leeyihiin ku dhawaad ​​guri kasta, sidaa darteed baarkinka waa baahi muhiim ah. Eldemir wuxuu u mahadceliyay Yener Acar, oo u shaqeynayay Kestel sedex shuruudood, iyo Alinur Aktaş, Duqa Magaalada Metropolitan Municipal, kuwaas oo howsha qurxoon u keeni doonta degmada.
Duqa magaalada Kestel Yener Acar wuxuu sheegay in baarkinka gawaarida la dhigto iyo suuqa uu yahay mowduuc ay soo raaceen sanado badan wuxuuna yiri: “Allaha u naxariistee waxaan aasaaska u dhigaynaa maanta. Waxaan aaminsanahay in sida ugu dhakhsaha badan loo dhamayn doono. Waxaan jecelahay inaan u mahadceliyo Duqa Magaalada Caasimadda ee mudnaanta siisay arrimahan mudnaantiisa iyo bilaabaya dhismaha. Khudbadihii kadib, Madaxweyne Aktaş iyo xubnihii borotokoolka, waxay riixeen batoonka waxayna aasaaska u dhigeen baarkinada baabuurta badan iyo aagga suuqa.
Maalgashiga weyn ee Kestel ee gaadiidka aan kala go'a lahayn ee Bursa
Xarunta Bedelka Kestel ee Kestel ayaa furan
Gaadiidka degmada Arifiye oo ay sababtay Hawlgallo Tacliin Sare ah
On The Railroad ee Bursaray
Sharciyayaashu waxay ku faafayaan Deegaanka Dilovası West
Shaqo ayaa socda si loo Adeegsado Khadka Ankara Sivas YHT Adeeggan Sannadkan
Tigidhada YHT Waa La Heli Karo!
Tareenada Xawaaraha Sare Ma Joogsan Doonaan Joojinta Dhex-dhexaadka ah
Goobta kaynta ah ee laga dejin doono Mersin ayaa noqotay 'libdlib Martyrs Memorial Forest'
Wasiirka Selçuk: '60 Milyan Lira Ayaa Lacag La'aanta Ah Ku Dhex Jiray Xisaabaadka'
Dhismaha diyaarad mataano ah oo lix-rakaab ah oo la yiraahdo NuD38 ayaa si guul leh lagu soo gabagabeeyey. Diyaaradda Nuri Demirağ waxay dhistay iyada oo ay dadaal ugu jiraan ganacsatada ugu muhiimsan Turkiga ee diyaaraddaha Turkiga ay hadda leeyihiin [More ...]
Ogeysiiska Qandaraaska: TCDD 4th Xarunta Sivas Xarunta Xarunta Tayeynta ettar
Nidaamka tareenka wuxuu gaadhay degmada Tekkeköy
Degmada Kubuk ee Ankara ayaa imanaysa tareenada